Ulawulo lwamehlo: Intsingiselo kunye nentlawulo yokomfuziselo kumzobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Enye yezinto ezisisiseko kulwakhiwo olubonakalayo lunyango lwamehlo. Oko kubonakala kungabalulekanga, enyanisweni, kuyinto esisiseko kwaye eya kuthi ibumbe iifoto zethu kwaye ngenxa yoko yonke into yokutolika. Umbhali uJacques Lacan wayenempembelelo ekhethekileyo kule nto (ngokusekwe kwimisebenzi kaSigmund Freud) ukusuka kubungakanani bengqondo kunye novavanyo lwengqondo. Wathetha nathi malunga iskopic driveOko kukuthi, uhlobo lwemo yoxinzelelo phakathi kokujonga, ukujonga kunye nokujongwa. I-scopic drive yimfuno yokuba wonke umntu kufuneka ajonge, ajonge, kwaye aqwalasele ngokubonakalayo kunye nemfuno yokuqwalaselwa. Ekugqibeleni iguqulela kumdlalo womnqweno, apho ukugxila kwamehlo ethu kuguqula umhlaba wonke esiwakhayo, kodwa ayisiyiyo kuphela imbono kunye nendlela umfoti okanye ngqo ikhamera ithatha okanye ibona ngayo imifanekiso, kodwa kwanendlela abalinganiswa nezinto abafumana ngayo ngaphakathi Indalo ebonakalayo, basebenzisa kwaye basebenzise amehlo abo. Zinxibelelene njani zonke izinto ngokujonga kwaye luhlobo luni lweempembelelo kunye nemithwalo ebalulekileyo ethweleyo.
Ukucacisa konke oku ngokunzulu ngakumbi nangakumbi ngokubonakalayo, siya kujongana nomnye wemithetho ebaluleke kakhulu emhlabeni womfanekiso. Umgaqo wokujonga. Uthotho lwezinto ezibonisa ngokubanzi eziza kusinceda ukuba sinike imifanekiso yethu ikhonkodensi, ukuvumelana kwaye oko kuya kusinceda ukuba sibe nolwazi olukhulu kunye nolawulo lwezixhobo zethu njengabadali. Kuwo wonke umsebenzi wakho wobomi, uya kufumanisa ukuba zonke ezo zinto zinokungahoywa okanye ezo ucinga ukuba ziyasebenza okanye azibalulekanga, zibaluleke kakhulu kuphuhliso lomsebenzi wobugcisa nobungcali.
Phambi kokuba siqale, ndingathanda ukongeza kwaye ndicacise into. Nangona sithetha ngesiqhelo kwaye sibhekisa kulo mxholo njengomthetho, gcinani engqondweni ukuba kunokubakho iimeko ezithile kwaye ewe asifanele sivumele umgaqo okanye umbono wethiyori ukusikhawulela, kuba ngokwenyani, ngamanye amaxesha sinako (kwaye nakwezinye ezininzi kufuneka) sishenxise kwimfundo. Ngokufanelekileyo, kufuneka sizame ukufumana imithombo eyahlukeneyo yobutyebi kwaye siyisebenzise ngokusekwe kwisitayile sethu kunye neemfuno zethu. Olu hlobo lomthombo lunokuvela kwithiyori esulungekileyo okanye kwindlela yethu yokusebenza.
Umgaqo wokujonga: Ukudluliselwa kweentlawulo kunye neentsingiselo kulwimi lokufota
Uthini kanye lo mthetho? Imalunga nokunika ukubaluleka kunye nokuqaqambela kwisenzo sokujonga isimilo sethu. Ukuba, umzekelo, sifota umfana kwiprofayile, kufuneka sinike indawo ethe kratya kwisakhelo sethu ngaphambili kunakwindawo yangasemva, oko kukuthi, ukunika ukubalasela okukhulu kunye nendawo kwindawo ejonge kuyo. Ngale ndlela, into esiza kuyenza kukunika ukubalasela ngakumbi kwisenzo sokujonga umlinganiswa wethu kunye nentlawulo ebonakalisa ngakumbi.
Kodwa oku kudlula ngaphaya kokujonga komzimba, kwaye kulapho konke kuguquka kube yinto enomdla ngokwenene. Singacebisa izinto ezithile ngokudala ukungangqinelani ngokwasemzimbeni kulwakhiwo lwethu kwaye ngale ndlela sinokubhengeza kwaye sibandakanye abaphulaphuli bethu kwinqanaba eliphezulu kwaye mhlawumbi elicokisekileyo.
Yima umzuzu ... Sithetha ukuthini ngokujonga?
Ndiyakhumbula ukuba kwicandelo lolwazi lwenzululwazi, esinye sezifundo ezinomtsalane kunye notshintsho endinethuba lokufunda ngalo yayikuHlalutyo loMfanekiso. Sichithe iiveki neeveki sihlalutya isindululo esibonakalayo, ipowusta yorhwebo, ipeyinti, iqhekeza lefilimu engekho ngaphezulu kwemizuzwana engamashumi amathathu kwaye mhlawumbi kuxa ujongene nezi ntlobo zemiceli mngeni, xa ufumanisa ubukhulu namandla olwimi olubonakalayo. . Ukuchitha phantse inyanga yonke uhlalutya ifoto kunokuba yinto emangalisayo. Uyayiqonda indlela oluntsonkothile ngayo ulwakhiwo lwemizobo. Enye yeepowusta ebincamathele kwimemori yam yenye yezona ziphikisayo nguDolce & Gabbana. Yayibonisa iqela lamadoda malunga nomfazi. Omnye wabo wayephethe eli bhinqa liselula kwaye wayebonakala elilawula ngogonyamelo. Ekuboneni kuqala, sonke besisazi, okanye sicinga ukuba siyazi ukuba lo mfazi wayethotyelwe, elixhoba lokuxhatshazwa kwaye la madoda ngokuqinisekileyo ayenolawulo phezu kwakhe nemeko leyo.
Nangona kunjalo, emva kokwenza uhlalutyo olusesikweni, kuthathelwa ingqalelo i-kinesics, proxemics kwaye ngakumbi ukujonga kwabo bantu, kwakuchukumisa ukufumanisa ukuba le ntokazi yayilawula ngokwenene loo meko. Ngaphandle kwembonakalo yokuqala eyazibonakalisayo kuthi kukuba ibiphantsi kolawulo lwelo qela lamadoda, inyani kukuba xa sigxila kumdlalo wegaz kwaye sihlalutya unxibelelwano phakathi kwabo bonke abalinganiswa, sifika kwisigqibo Oko ngokuqinisekileyo nguye olawulayo kwaye ngendlela abangabathobeli ngayo abalinganiswa.
Ngale nto ndithetha ukuba isenzo sokujonga akusoloko kufuneka sixhaswe yimicimbi esesikweni, ebonakalayo, ecacileyo kunye necacileyo. Isenzo sokujonga sinokuba yingqondo ngokupheleleyo. Isimo sethu sinokujonga kwindawo enye, kodwa ngokwenene, ngokweemvakalelo, ujonge kwenye indawo. Mhlawumbi umlinganiswa wethu usifihlela into esityhilwa ngumfoti wethu. Ngoba kutheni? Ndicebisa umzekelo ocacileyo kwaye ndiqinisekile ukuba uyakuwuqonda ngcono. Apha sinemifanekiso emibini efanayo. Kokuqala, ophambili ubaleka ejonge phambili. Umfaki-zithombe udala unxibelelwano oluvumelana nolwakhiwo lwegraphic, ehlonipha imeko yesiqhelo. Siyayazi le nto kuba ishiya isithuba esithe xhaxhe ngaphambili kumxholo kunangasemva, inika ukubaluleka nokubaluleka kwamehlo. Isimo sethu sicacile, sinyanisekile kwaye sinikela ingqalelo kwisenzo sakhe sokujonga. Nangona kunjalo, kwityeli lesibini sifumana abantwana ababini, bebaleka, kuphela kule meko indawo esemva kwabo inikwe ukubalasela okukhulu kunendawo apho bajonge khona. Siyazi ukuba siyabulela kolu lwakhiwo ukuba abalinganiswa abajonganga phambili. Ngandlela thile bajonge ngasemva kuloo nto bayishiyileyo. Emva koko sifumana i-shades ye-melancholy. Olo lutsha lishiya into kwaye thina njengababukeli siziva sililize.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Ulawulo lwamehlo: Intsingiselo kunye nentlawulo yokomfuziselo kumzobo
Ama-20ds ama-3ds ama-Max ama-tutorials
Khuphela iincwadana zasimahla ezingama-422 ezivela kwiMetropolitan Museum of Art eNew York